ရွှေသားစစ်စစ် သိန်းတစ်ထောင်ကျော်ဖိုးရှိတဲ့ ထိုင်မသိမ်းနဲ့ Show လျှောက်ခဲ့တဲ့ Model ရွှေစင် - Shwe Yaung Lan
မော်ဒယ်လ်လောကမှာ ရွှေစင်ဆိုတာ နေရာတစ်ခုရယူထားနိုင်သူပါ… ပုရိသတို့ကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ အမိုက်စား Body လေး ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ Innocent Face လေးကြောင့်လည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကပါ အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ ရွှေစင်ဟာ Mingalar Mandalay ရဲ့ 5th Year Anniversary ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်…
ဒီပွဲမှာ ရွှေစင်ဝတ်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံက မြင်ရသူတွေကို တအံ့တသြ ငေးမောကြည့်ရလောက်အောင် လှပ နေခဲ့တာပါ….ရွှေစင်ကတော့ အဲဒီပွဲမှာ ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုး ချုပ်လုပ်ပေးပြီးတော့ ရွှေသားစစ်စစ် ၁ ပိဿာကျော်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ထိုင်မသိမ်း ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ပြီး ရှိုးလျှောက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
ဒီဝတ်စုံကိုတော့ “ထာဝရ ဝိန့်စိန်” ကနေ စပွန်ဆာပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ခမ်းနားလှပလွန်းတဲ့ ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ ရှိုးလျှောက်နေတဲ့ ပုံတွေကို ရွှေစင်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ပြန်လည် မျှဝေပေးခဲ့ရာမှာတော့ ပရိသတ်တွေ တအံ့တသြ အားပေးခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ရွှေကနုတ်ပြားအမျိုးမျိုး ၁ ပိဿာကျော်နဲ့ ဆင်ယင်ထားတဲ့ အဲဒီဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ပြီး ရှိုးလျှောက်နေတဲ့ ရွှေစင့်ရဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ကြည့်လို့ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…..
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း တစ်ကိုယ်လုံးကို ရွှေကွပ်နိုင်တဲ့အထိ ချမ်းသာကြပါစေဗျာ..
Source : Shwe Sin ရွှေစင်
ေမာ္ဒယ္လ္ေလာကမွာ ေရႊစင္ဆိုတာ ေနရာတစ္ခုရယူထားႏိုင္သူပါ… ပုရိသတို႔ကို ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္တဲ့ အမိုက္စား Body ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ Innocent Face ေလးေၾကာင့္လည္း မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြကပါ အားေပးခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ ေရႊစင္ဟာ Mingalar Mandalay ရဲ႕ 5th Year Anniversary ပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္…
ဒီပြဲမွာ ေရႊစင္ဝတ္ခဲ့တဲ့ ဝတ္စံုက ျမင္ရသူေတြကို တအံ့တၾသ ေငးေမာၾကည့္ရေလာက္ေအာင္ လွပ ေနခဲ့တာပါ….ေရႊစင္ကေတာ့ အဲဒီပြဲမွာ ဒီဇိုင္နာ မ်ိဳးမင္းစိုး ခ်ဳပ္လုပ္ေပးၿပီးေတာ့ ေရႊသားစစ္စစ္ ၁ ပိႆာေက်ာ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ထိုင္မသိမ္း ဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ရိႈးေလွ်ာက္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္….
ဒီဝတ္စံုကိုေတာ့ “ထာဝရ ဝိန္႔စိန္” ကေန စပြန္ဆာေပးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္..
ခမ္းနားလွပလြန္းတဲ့ ဒီဝတ္စံုေလးနဲ႔ ရိႈးေလွ်ာက္ေနတဲ့ ပံုေတြကို ေရႊစင္က သူ႕ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးခဲ့ရာမွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြ တအံ့တၾသ အားေပးခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္…
ေရႊကႏုတ္ျပားအမ်ိဳးမ်ိဳး ၁ ပိႆာေက်ာ္နဲ႔ ဆင္ယင္ထားတဲ့ အဲဒီဝတ္စံုေလးကို ဝတ္ၿပီး ရိႈးေလွ်ာက္ေနတဲ့ ေရႊစင့္ရဲ႕ ခ်စ္စဖြယ္ပံုေလးေတြကို ပရိသတ္ႀကီးတို႔ ၾကည့္လို႔ရေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္…..
ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း တစ္ကိုယ္လံုးကို ေရႊကြြပ္ႏိုင္တဲ့အထိ ခ်မ္းသာၾကပါေစဗ်ာ..
Source : Shwe Sin ေရႊစင္
Previous post ယနေ့ထီဖွင့်ပွဲမှာ မိတ်ထီလာမြို့မှပဲ သိန်း ၂၀၀၀ ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့(ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်ပါသည်)
Next post ထီဖွင့်ပွဲနေ့မှာ Online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ လူရွှင်တော်ချက်ကြီး ရဲ့ “လွဲလွဲလေးပဲကောင်းပါတယ်”Video ဖိုင်